N'èzí na Egwuregwu Ihe Factory |Ndị na-emepụta ihe dị n'èzí China na egwuregwu, ndị na-ebubata ya
N'ogbe okike akara ngosi kọfị kọfị Silicone Foldable Coffee Mug nwere mkpuchi maka campin
SIP, STOW, GA- dara ada (ịdị elu 2-inch x dayameta 4-inch).Iko njem kọfị na-adaba n'akụkụ dị mfe ihicha nke ma igwe efere na ngwa ngwa ngwa ngwa.
SAFE & SUSTAINABLE: A na-esi na silicone ọkwa nri na ihe eji emegharị ihe nke pụtara na enweghị BPA, Phthalates, edu ma ọ bụ gluu.
Ngwaahịa ọhụrụ 300ML N'ogbe Reusable Rubber Water Mug Silicone Folding Collapsible Collapsible Coffee Cup Maka njem n'èzí
The rotatable okpu imewe n'enweghị ntụkwasị obi na-emechi maka njem na nchekwa nke mmiri, mmiri ara ehi, wdg, na-egbochi karama imeghe na mberede, karama n'onwe ya na tightly mechie na ọ gaghị ihichapụ ma.
Anyị na-enye otu ụtọ dị ọcha nke iko iko ahụ na-eme, mana yana uru agbakwunyere nke ịdịte aka na-emebi emebi, na-eme ka ha bụrụ ezigbo enyi gị ka ị nọrọ jụụ mgbe ị na-eme njem, ịma ụlọikwuu, na-eme njem.Nhazi dabara adaba na-eme ka ọ dị mfe iburu mgbe ị na-aga.
Mug ụmụaka na-aṅụ mmiri a na-ebugharị ebugharị na iko Silicone
Mpịakọta chepụta&Portable: Ibe 5 a na-akpụ akpụ azu a na-agbakọ bụ nke a na-atụgharị ma dị mfe iburu.Ị nwere ike itinye ya na akpa, akpa.Nhazi nke nwere ike imebi, dị mma maka njem n'èzí, ịma ụlọikwuu, njem na egwuregwu.
Okpomọkụ na-eguzogide: iko anyị nwere ike ịdaba na mkpuchi nwere ike iguzogide oke okpomọkụ site na-40℉ ruo 480 ℉, dabara maka ihe ọṅụṅụ oyi ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ na-ekpo ọkụ.Igwe efere adịghị mma.
Omenala akara ngosi nri nri agba agba agba agba mmiri mmiri silicone
Kalama mmiri silicone bụ isi ngwaahịa na ụlọ ọrụ anyị.Kalama mmiri siicone anyị bụ nke kachasị maka ime ihe n'èzí.Ihe nke karama mmiri silicone anyị bụ ọkwa nri n'efu 100% BPA.Kalama mmiri silicone nke anyị anaghị egbu egbu, yana SGS/ LFGB/ CE kwadoro ya.Ọ bụ ụdị dị nro, adịghị egbu egbu.
Ihe omume ndị dị n'èzí na-eji mkpuchi mpịakọta iko:Mpịakọta iko kọfị kọfị a na-apụghị imebi emebi na-ebuli iko, chekwaa ohere, dị mfe ihicha, ezigbo onye inyeaka maka njem gị wee gaa ebe a na-esi nri.Zuru okè maka mmiri dị ọkụ ma ọ bụ dị jụụ dọwara adọwa, ihe ọṅụṅụ ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ carbonated, Kwesịrị ekwesị maka ụlọ akwụkwọ, njem, ịma ụlọikwuu, ịga njem, ịrị ugwu, ịkụ azụ, ịgba ugwu na ihe omume ndị ọzọ na-eme n'èzí na ihe nkiri.
Agba 8 mm Omenala Egwurugwu Omenala gbagọrọ agbagọ Silicone na-aṅụ ahịhịa nri ọkwa bevel mbepụ ahịhịa a na-emegharịgharị
Nnukwu nha & Mgbanwe: nha zuru oke maka 30&20 Oz Yeti / Ozark / Rtic Tumblers.Ọ dị mma maka mmiri, lemonade, sodas ma ọ bụ kọfị.
EKWESỊRỊ AKWỤKWỌ EKWESỊRỊ, Ọ BỤGHỊ maka ojiji na Microwave.Anyị na-emepụta ahịhịa ndị a maka ụdị mmanya ọ bụla - dị mfe iji ọbụna maka ụmụaka gị - dabara maka ụdị ọ bụla nke tumblers ramblers na dị mfe ihicha.Cheta ịsacha ngwaahịa ndị ahụ nke ọma tupu ojiji mbụ.Jiri ncha efere na ọtụtụ mmiri saa ha site na iji brọsh ihicha.
Ngwa mmanya na-ebugharị ahịhịa ahịhịa na ahịhịa kwụ ọtọ na-edozi ahihia ị drinkụ mmanya ọzọ
Ọ dị mma ma dị mma ịṅụ mmanya:Arọ na bitable nri-ọkwa silicone, mmetụta eke n'ọnụ ha siri ike na-adịghị mfe adọwa iche, adabara ụmụaka ma ọ bụ ndị chọrọ a kpam kpam juu ahịhịa.Ọ dị nchebe karịa ahihia ígwè/plastic/ iko, ọ gaghị ata ọnụ gị, ezé, mgbe ị na-eje ije ma ọ bụ na-anya ụgbọ ala.
Nke kacha dị ọcha:Nchacha nhicha abụọ ahụ dị nnọọ mfe iji, nke nwere ike ihicha nke ọma n'ime ahịhịa.Mgbe ihichachara, a na-atụ aro ka esi nri na mmiri esi mmiri maka nkeji ole na ole ma ọ bụ akpọọ nkụ na nnukwu okpomọkụ.
Ụdị Ọhụrụ 50Ml 70Ml 90Ml Nri nri Silicone Travel Set Cosmetic Bottle with Suction Cup
Oghere sara mbara maka ndochi na ihicha:N'adịghị ka ọtụtụ karama njem, nke a bụ oghere sara mbara na-eme ka ọ dị mfe jupụta na mmiri dị arọ, ọ na-adabakwa nrịanrịa ngwa ngwa iji hichaa ime tube ahụ.
valvụ na-enweghị ntapu:Okpu karama ahụ nwere valvụ enweghị ntapu nke na-egbochi ntapu ma hụ na ị na-enye naanị ego kwesịrị ekwesị mgbe niile.
N'ogbe 100Ml Obere obere Kean Silicone mara mma ihie ihe akaebe TSA akwadoro ihe nhazi karama ụgbọ mmiri silicone.
N'ogbe hight àgwà onye nlekọta sub-karama ncha ntutu isi silicone njem karama set
Ihe onwunwe adịchaghị & Nchekwa:A na-eji silicone nke na-enweghị nri BPA na-eme karama njem ndị a, ọ dị mma ma dị mma maka ezumike gị, ọkụ na ihe dị nro na-enye gị ohere ịgbanye mmiri mmiri ahụ ngwa ngwa.